WSLconf: Microsoft inogadzirira musangano weLinux munaKurume | Linux Vakapindwa muropa
WSLconf: Microsoft iri kugadzirira musangano weLinux munaKurume (uye ndinofanira kubvuma kuti ndiri kuziva)
Pakange paine nguva apo Windows neLinux vaiwirirana zviri nani. Ndichiri kurangarira kuti zvaive nyore sei kuisa Ubuntu neWubi installer, asi shanduko dzakaunzwa muWindows 8 dzaireva kuti taifanira kudzokera pakushandisa Dualboot sezvataigara tichiita. Kunyangwe ichokwadi zvakare kuti munguva pfupi yapfuura Microsoft iri kutarisa penguin zvishoma uye humbowo hweiyi ndiyo WSL pane iyo WSLconf.
Microsoft Yakazivisa kuti ivo vari kuzopa a Musangano weLinux. Vachaidaidza kuti WSLconf 1, saka zvinoita senge ichave yekutanga kune mazhinji. Iwo maAcronyms anobva kuWSL + conf, inova "Conf (erence) paWindows Subsystem yeLinux", sisitimu yakaunzwa makore anopfuura matatu apfuura ayo anotibvumidza isu kumisikidza nekumhanyisa iyo terminal yemhando dzakasiyana dzeLinux mukati Windows 10.
WSLconf 1 ichaitika munaKurume 2020
WSLconf ichave chiitiko chemunharaunda-munhu wese anogona kuenda mahara, hongu, kana tiri padyo nekambasi yeMicrosoft Redmond. Kumusangano kuchave nekuratidzwa kubva kuvakagadziri vePengwin, Microsoft WSL timu uye Ubuntu timu kuWSL neCanonical.
Hapanazve rumwe ruzivo rwakaziviswa pamusoro pezvavanotaura pamusangano. Iyo yekutanga vhezheni yeWSL yakaburitswa muna Nyamavhuvhu 2016 uye yave kuwanikwa WSL 2, saka tinogona kufunga kuti WSL 3 ichaunzwa pakati pe inotevera Kurume 10-11. Kana zvirizvo, zvimwe zvezvinhu zvitsva zvinogona kuverengerwa kutsigira iyo "snap" rairo iyo inotibvumidza isu kubata Canonical's Snap mapakeji
Kune rimwe divi, uye izvi zviri kutofunga zvakanyanya, WSL haitibvumidze kuita zvirongwa / mirairo inobatana nechiratidziro, saka hatigone kumhanyisa zvirongwa neGUI kana, semuenzaniso, kurekodha desktop yechikwata chedu neFFMPEG. Izvo zvauya mupfungwa dzangu, uye ndinobvuma kuti zvingave zvakawanda kubvunza, ndezvekuti WSL 3 yakatitendera. Chii chaunofungidzira kuti vachataura kwatiri kuWSLconf 1 munaKurume 2020?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux vs. Windows » WSLconf: Microsoft iri kugadzirira musangano weLinux munaKurume (uye ndinofanira kubvuma kuti ndiri kuziva)
Linux 5.4 ichawana kuenderana nemamwe emitambo mitsva yeWindows